Ayanda amacala njengoba ‘sekudlaliswa imali’ ebholeni lakuleli - Impempe
Ayanda amacala njengoba ‘sekudlaliswa imali’ ebholeni lakuleli
Ukungaqali kwemidlalo yokuhlunga iqembu elizodlala kwiDStv Premiership ngoLwesibili, kukhomba kona ukuthi iPremier Soccer League (PSL) isiphethe amaqembu ahlukile manje akwazi ‘ukujikijelana’ ngemali kushode ozolimala.
Kuyacaca ukuthi luya kude udaba lweRoyal AM neSekhukhune United, okumaqembu abanga ukunyukela kwiDStv Premiership, ngaphandle kokudlala imidlalo yokuhlunga.
Imidlalo yokuhlunga imisiwe ngenxa yencwadi etholwe yiRoyal AM enkantolo yokuthi ingaqhubeki le midlalo. Vele bekulindelekile lokhu njengoba iRoyal AM isilidlulisele phambili icala elithinta yona neSekhukhune, mayelana nokuthi yiliphi iqembu okumele libe ngompetha beGladAfrica Championship.
Okuhlalukayo lapha ukuthi ‘kusazojikijelwana’ ngemali kuze kuyofikwa ngisho kwiFifa noma iCAS, ngoba womabili la maqembu abangayo sengathi acaphuna kusale. Njengokusho kukaMato Madlala, oyisikhulu esiphezulu esibambile kwiPSL, “uma ngabe uzizwa ukuthi awugculisekile nganoma yisiphi isinqumo, yilungelo lakho ukuthi uqhubekele phambili ufike lapho ufika khona.”
Leli lungelo lokudlulisela icala phambili lihle lona emaqenjini akwazi ‘ukujikijelana’ ngemali kungabi ndaba zalutho. Nokho lokhu kulifaka ehlazweni ibhola laseNingizimu Afrika ngoba kuze ‘kushaywane’ ngemali nje, yingoba kukhona ubudedengu obenzekile ngesikhathi kuqhubeka isizini.
“Uma ngabe uzizwa ukuthi awugculisekile
nganoma yisiphi isinqumo, yilungelo lakho
ukuthi uqhubekele phambili ufike lapho ufika khona”
Lo ‘majikijelana’ ngemali ubukwa yiChippa United neRichards Bay FC, bekude le, belindele ukuthi uphele ukuze kuqale imidlalo yokuhlunga. Kuyavela futhi ukuthi iTS Sporting nayo isiwungenele lo mdlalo ‘wokudlalisa’ imali ukuze ithole ubulungiswa obuthile.
Usihlalo waleli qembu uSlungu Thobela ukuqinisekisile ukuthi sebefake iPSL enkantolo mayelana nesinqumo sayo, futhi bakholwa ukuthi nabo abafanele amaphuzu amathathu.
ISporting ikhala ngomdlalo lapho yayidlala khona neJomo Cosmos ngoJanuwari 13, lapho iCosmos yephula khona umthetho wabadlali abangaphansi kweminyaka engu-23. Kulowo mdlalo Ezenkosi zawina ngo 1-0, kwathi uma zitholakala zinecalala zahlawuliswa imali, zangemukwa amaphuzu.
Uma iSporting iliwina icala kuzosho ukugudluza iRichards Bay endaweni yesithathu kwilogi. NeCape United ifake icala ukuthi kuguqulwe isinqumo somehluleli ozomele ngokuthi iqingqelwe ngokungafiki emdlalweni eyayizowudlala neCape Town Spurs.
Leli qembu lithi imbangela yalokhu ukuthi baba baningi abadlali abatholakala beneCovid-19 ekhempini yalo. Uma kuwina i-United, iSpurs izodliwa yizembe kusinde iSteenberg United.
Lisezingeni elihluke kakhulu manje ibhola lePSL lapho kukhuluma imali uma ukwazi ‘ukulwa’ ngayo. Nokho yilungelo elivumelekile elishaya amaqembu angenayo kahle inkece. Amanye nje ‘asazojikijelana’ ngemali kuminyane utshumo.
Previous Previous post: IPSL ithi iya enkantolo nayo iphikisa ukumiswa kweyokuhlunga
Next Next post: LISENETHINI!: Izoxosha abaxhasi le nsambatheka yePSL